Amagumbi amabini okulala eNdwendwe kwi-Gower Peninsula
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTym
Ibekwe kwiPeninsular yeGower. Igumbi lokulala elikhanyayo, elinomoya kunye negumbi lokuhlala elimnandi, elinendawo yokuphumla enkulu, igumbi lokuhlambela elikhulu kunye nomnyango wokungena.
Igumbi lokulala eli-1-igumbi lokulala eliphindwe kabini okanye iibhedi ezingamawele ezi-2 ezingatshatanga, iwadilophu kunye neTV.
Igumbi lokulala eli-2-Ibhedi ephindwe kabini, iwadilophu kunye neTV.
Indawo yokuphumla ineesethi ezimbini, iTV, isidlali seDVD, ukhetho lweeDVD kunye netafile yokutyela.
Unokusebenzisa igadi yethu kunye nendawo enkulu egqunyiweyo yokuhombisa.
Ukupaka isithuthi esiphakathi.
Sizokubulisa xa sifika.
Sikwabonelela ngeti, ikofu, iswekile kunye nobisi.
Ilungele iintsapho njengegumbi lokulala umntu unokuba nebhedi yobukhulu bokumkani okanye ibhedi enye. Ngoko ke, umzekelo, ukuba unabantwana ababini abanganqweneli ukwabelana ngebhedi enye, singabamkela loo nto. Nceda usazise ukhetho lwakho. Akukho msantsa ebhedini xa kuqwalaselo ukumkani-ubungakanani. Igumbi lokulala lesibini linebhedi ephindwe kabini.
Isihlomelo sinegumbi laso lokuphumla labucala kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokuphumla linetafile yokutyela kunye nezitulo. I-TV enkulu, isidlali seDVD, ukhetho lweeDVD, iketile, itoaster, indibaniselwano yemicrowave kunye nefriji zikwakhona, kunye nezitya, izinto zokuthambisa, iimagi kunye neeglasi.
Iti, ikofu kunye neswekile zibonelelwa ngexesha lokuhlala kwakho.
Uyakwazi ukusebenzisa igadi yethu kunye nendawo enkulu egqunyiweyo yokuhombisa.
Sikwanayo nendawo yokugcina iibhodi zokusefa, iibhayisekile, njl.
Umatshini wokuhlamba uyafumaneka xa uceliwe.
Ilali inevenkile ethengisa izinto ezinkulu, iindawo zokutyela kunye nezinto ezithathwayo (intlanzi kunye neetships, ipizza, iibhega, ikheri, njl.njl). Indawo yasekuhlaleni inokufikelela kwezinye izinto eziluncedo.
Kukho ukufikelela ngokulula kwiilwandle ezidumileyo zeGower, iindlela zeebhayisekile, iNdlela yoNxweme, iziko leWild Fowl Wetlands kunye nePerriswood Archery kunye neFalconry Centre. Kukho imixholo eyahlukeneyo / iipaki zokuzonwabisa malunga neyure ukusuka (i-Oakwood Theme Park, ifama yoFolly, iManor Wildlife Park kunye neHeatherton World of Activities)
Umbuki zindwendwe ngu- Tym
Siya kufumaneka ngokobuqu ixesha elininzi, okanye siqhagamshelwe ngefowuni ephathwayo.
Siyavuya ukunika naluphi na uncedo okanye isikhokelo apho kunokwenzeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pen-clawdd